painglay's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog PostsDiscussions (5)EventsGroups painglay's Likes Painglay's Friends
View All painglay's Discussions
Domain နှစ်ခု အပြိုင်ထောင်ချင်လို့ပါ
ITpro မှအကိုတို့အမတို့ မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်မေးစရာလေးရှိလို့ပါ ကျွန်တော် Domain နှစ်ခုထောင်ချင်လို့ပါ Local နက်ဝက်ထဲမှာပဲပေါ့Domain Name ကလဲအတူတူပဲဗျာ (mydomain.com ) အဲ Domain နှစ်ခုကဗျာ…Continue Started this discussion. Last reply by myogyi Dec 27, 2010. View All
painglay has not received any gifts yet
Give painglayaGift
painglay replied to Kyaw Myo Hlaing's discussion သိရင် ပြောပေးကြပါခင်ဗျာ"တက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော် နည်းနည်း ၀င်ပြောကြည့်မယ်
ISA ရဲ့ filrewall policy ထဲက user တွေကို internet access ပေးတဲ့ rule ကို ညာကလစ် နှိပ် အဲထဲမှာ configure HTTP ကိုနှိပ် အဲထဲမှာ signature ထဲကိုသွား add ဆိုတာကိုနှိပ်
ဖြည့်ရမှာက name မှာ Gtalk ပေါ့…"Dec 29, 2010myogyi replied to painglay's discussion Domain နှစ်ခု အပြိုင်ထောင်ချင်လို့ပါ"You are welcome.
Here are the tips for testing.
Download and install VirtualBox from http://www.virtualbox.org/
Install one Window 2003 server and updated with service pack.
Create another virual hard disk by using "VBoxManage.exe …"Dec 27, 2010painglay replied to painglay's discussion Domain နှစ်ခု အပြိုင်ထောင်ချင်လို့ပါ"အခုလို ၀င်ရောက်ဖြေကြားပေတဲ့ ကိုမျိုးကြီး ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ အကို့ရဲ့လင့်လေးက ကျွန်တော့အတွက်တော့အသုံး ၀င်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပဲ ကိုမျိုးကြီး ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တယောက်ထဲစမ်းရတာ တမျိုးကြီးပဲဗျာ အဆင်သိပ်မပြေဘူးဗျ သူငယ်ချင်ကလဲမရှိဘူးဗျာ…"Dec 27, 2010painglay and thethanlin are now friendsDec 27, 2010myogyi replied to painglay's discussion Domain နှစ်ခု အပြိုင်ထောင်ချင်လို့ပါ"Here are the useful links to read first.
For setup secondary server, look in this…"Dec 24, 2010painglay replied to painglay's discussion Domain နှစ်ခု အပြိုင်ထောင်ချင်လို့ပါ"Sorry ဗျာ ကျွန်တော် OS ပြောဖို့မေ့သွားတUpload Filesယ် Windows 2003 ပါအကို screen shot ကတော့ ကျွန်တော်ထက်တင်ပေးပါမယ်ဗျာ"Dec 24, 2010myogyi replied to painglay's discussion Domain နှစ်ခု အပြိုင်ထောင်ချင်လို့ပါ"Please mention more detail with screen shot.
Which OS are you using? Windows 2003 or 2008 or Win2000 or Linux BIND server?"Dec 24, 2010painglay postedadiscussionDomain နှစ်ခု အပြိုင်ထောင်ချင်လို့ပါITpro မှအကိုတို့အမတို့ မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်မေးစရာလေးရှိလို့ပါ ကျွန်တော် Domain နှစ်ခုထောင်ချင်လို့ပါ Local နက်ဝက်ထဲမှာပဲပေါ့Domain Name ကလဲအတူတူပဲဗျာ (mydomain.com ) အဲ Domain နှစ်ခုကဗျာ ဒီဘက်မှာပြင်ရင်ဟိုဘက်မှာလဲ ပြင်ပြီးသားဖြစ်မယ်ဗျာ ကျွန်တော်သိတာတော့ Domain ရယ် Child Domain ရယ်ထိုင်တယ်တဲ့ဗျာအဲဒါကျွန်တော်လိုက်ထိုင်တာမရဘူးဖြစ်နေတယ် Child Domain အတွက် ဒီဘက် Domain မှာဘာ Zone တွေ လုပ်ရသေးလဲမသိဘူးဗျာသိတဲ့အကိုတို့အမတို့ ကူညီကြပါအုန်း ITpro မှ ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့ Discussion…See MoreDec 24, 2010 5
painglay is nowamember of MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT ProfessionalsDec 24, 2010 Welcome Them! RSS
MCP MCSE CCNA